Emeelarịrị ụdị Git 2.21.0 ọhụrụ ahụ ma ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
Ọchịchịrị | | Emelitere na 26/02/2019 17:40 | Aplicaciones
Git bụ otu n'ime usoro nchịkwa nsụgharị kachasị ewu ewu, nke a pụrụ ịdabere na ya, ma na-enye mgbanwe usoro ọrụ na-enweghị njikọ dabere na nsụgharị na njikọta.
Iji hụ na iguzosi ike n’ezi ihe n’akụkọ ihe mere eme na iguzogide mgbanwe ịsị na mbụ, a na-eji mkpofu akụkọ ihe mere eme niile eme ihe na ntinye ọ bụla na ntinye aha dijitalụ nke ndị mmepe mkpado na nkwenye nwekwara ike ikwenye.
Emepụtara ụdị ọhụụ nke Git 2.21.0 kesara usoro njikwa usoro ọhụụ.
N'iji ya tụnyere mbipute gara aga, e mere mgbanwe 500 na nsụgharị ọhụrụ ahụ, kwadebere ya na nsonye nke ndị mmepe 74, nke 20 n'ime ha sonyere na mmepe maka oge mbụ.
1 Git 2.21.0 Key New Atụmatụ
1.1 Algọridim ọhụrụ
2 Etu esi etinye Git 2.21.0 na Linux?
Git 2.21.0 Key New Atụmatụ
Nhọrọ «–Dbọchị = mmadụ« agbakwunyere na "git log" na iwu ndị ọzọ, na-enye gị ohere igosipụta ụbọchị n'ụdị ndebiri ma gụgharịa.
Na nke ahụ enwere ike ịhọrọ usoro a gbanwere dịka afọ nke ihe omume. Maka omume emere, "N nkeji gara aga" ga - egosi (dịka ọ dị "–Dbọchị = ikwu"), maka ihe ndị mere na nso nso a ga-egosi ụbọchị na oge na maka mgbanwe ochie naanị ụbọchị, ọnwa na afọ.
Ọzọkwa, a na-enye nhọrọ «–Dbọchị = akpaaka: mmadụ« nke metụtara usoro ọhụrụ naanị mgbe ezigara ya site na njedebe na mgbe a na-ebute ya na faịlụ ma ọ bụ iwu ọzọ ọ na-eji usoro ndabara.
Na iwu «git cherry-ghota « enwere ike iji nhọrọ ahụ «-m"(isi akara) mgbe akọwapụtara ya "Git cherry-pick -m1", ya bụ, na - enye gị ohere ịmegharị nkwa site na ịhọrọ nne na nna mbụ nke nke a dị ka ngalaba nke isi ahịrị. N'ọnọdụ ndị ọzọ, njehie ahụ ka ga-egosi.
Iji na-ebuli arụmọrụ, iwu «git log -G«, Nke na-eme nchọpụta okwu mgbe niile, ugbu a anaghị arụ ọrụ faịlụ ọnụọgụ abụọ belụsọ na« nhọrọ akọwapụtara nke ọma–Isi»Ma ọ bụ jirila ederede ederede.
Ndozi agbakwunyere «http.nyocha«, Nke ahụ na-enye gị ohere ịchọpụta akara nke usoro HTTP kachasị amasị ejiri mgbe ị na-eweghachite ma ọ bụ nyefee mgbanwe. Nhọrọ ahụ chọrọ ọbá akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ.
Enwere ike iji iwu "git worktree wepụ" na "git worktree move" ma ọ bụrụ na enwere submodulu ebidoghị na osisi na-arụ ọrụ (na mbụ enweghị ike iji arụmọrụ ndị a ma ọ bụrụ na enweghị submodule).
Kọwapụta nhọrọ “–format =" maka ụdị, mkpado, na ịchọ njikọ jikọtara ndepụta nke njirimara maka ihe ndị ewepụtara site na object_info API.
Na nhapu ohuru nke Git 2.21.0 Emepụtara nhọrọ iji SHA-256 hashing algorithm kama SHA-1 pụta ìhè mere mgbe Git kere na »NewHash« mode.
Na mbụ ezubere ya iji SHA3-256 algorithm, mana n'ikpeazụ ndị mmepe lekwasịrị anya SHA-256,, ebe ọ bụ na ejirila SHA2 na Git maka ntinye aha dijitalụ.
Nhọrọ nke nhọrọ bụ na mgbe ị na-eji SHA-256 na SHA3-256 na koodu Git, imebi nke ọ bụla n'ime ha ga-eduga na nsogbu nchekwa, ya mere, ọ ka mma ịdabere na otu algorithm karịa abụọ.
Ọzọkwa, SHA-256 na-ekesa ma na-akwado ya na ọba akwụkwọ ọ bụla crypto, ọ na-egosipụtakwa ezigbo arụmọrụ.
Iwu ahụ "git ndenye ọpụpụ [osisi-ish]" weputara ọnụọgụ nke ụzọ a ga - ewepụta na ndeksi ma ọ bụ osisi osisi (osisi-ish).
A gbakwunyeara nhọrọ "–keep-non-patch" na iwu "git quiltimport".
Emelitere mmejuputa iwu nke "git diff –color-አንቀ-akpali-ws".
A gbakwunyela ọkọlọtọ "% S" na "log –format" iji gosipụta ngosipụta banyere mmalite ntinye akwụkwọ.
Etu esi etinye Git 2.21.0 na Linux?
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ imelite ma ọ bụ wụnye ngwá ọrụ a, naanị anyị ga-emepe ọnụ na usoro anyị ma pịnye otu n'ime iwu ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » E wepụlarị Git 2.21.0 ọhụrụ ahụ ma ndị a bụ akụkọ ya